GarsoorNews - Maxaabiis Xaalad nololeed ku heysato Xabsiga Garoowe +SAWIRO
by Farah C/laahi | Monday, Feb 13, 2017 | 67 views
Garoowe (Garsoor Online) – Ku dhawaad 50 Maxaabiis oo ku xiran Xabsi ku yaalla Magaalada Garoowe ee Xarunta Maamulka Puntland ayaa ka cabanaya xaalad nolol xumo iyo dhibaatooyin kale.
Maxaabiistan hadda xiran ayaa tiradooda gaareysa 45 Ruux, kuwaasi oo lagu eedeeyay in ay yihiin Burcad Badeed, kadib markii Maraabkiibta Dagaalka ee Seychelles ay ka qabteen biyaha Soomaaliya.
Qaar ka mid ah Maxaabiistan ayaa sida ay sheegeen markii laga keenayay Dalka Seychelles, waxaa lagu wargeliyay in xukunkooda ay racfaan ka qaadan doonaan markii lagu soo celiyo Dalka Soomaaliya.
Balse waxaa lagu wargeliyay dhamaantood in uu dhaqan gali doono Xukunka ay ku soo riday Maxkamada Seychelles, sida uu shaaciyay, Maxamed Cabdullaahi oo ka mid ah Maxaabiista.
Maxkamada ayaa ku riday Muwaadiniintan Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay burcad badeednimada xukuno u dhaxeeya 20 ilaa iyo 30 sanno oo Xabis ah.
Maxamed Cabdullaahi oo ka mid ah Maxaabiistan ayaa sheegay in dhamaantood lagu soo xukumayay Dalka Seychelles, waxuuna beeniyay in uu qeyb ka ahaa Kooxaha Burcad Badeeda.
Dhibane Maxamed Cabdullaahi ayaa waxuu xusay in 28 Sano oo xabsi lagu soo xukumay, haatanna uu qaatay 6 Sano balse waxuu Xukunkiisa ku tilmaamay mid aan cadaalad aheyn.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxuu tilmaamay in uu ku faraxsan yahay in Dalka Madaxweyne looga dhigay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxuuna ka dalbaday Madaxweynaha cusub uu cafis u sameeyo.
Dhinaciisa, Mahad Maxamed Faarax (Tima-cadde) oo ka mid ah maxaabiista kuna xukuman 27 oo Xabsi ah ayaa waxuu sheegay in ay wajahayaan dhibaatooyin badan xagga nolosha ah, taasi oo ku heysata Xabsiga Magaalada Garoowe.
Waxuu qeexay qaar ka mid ah saaxiibadiisa ay ku dhinteen xabsiga, kuwa kalena ay indhaha beeleyn, isagoona intaasi ku daray in ay jiraan kuwa kale oo haatan qaba cuduro kala duwan sida Dhiig-karta iyo Sokorta.
“Aniga iyo 4 kale oo Dooni saaran, kaluumeysina ka wadna Biyaha Soomaaliya, ayaa waxaa gacanta nagu dhigay Ciidamo saaran Markab Dagaal oo laga leeyahay Dalka Seychelles”, sidaasi ayuu yiri Maxbuus Mahad.
“Intaasi kadib, indhaha ayaa nagala xiray, waxaa nala saaray Markab kale, kaasi oo inoo qaaday dhanka Dalka Seychelles, halkaasi oo lagu qaaday dacwada nagula soo eedeeyay”, intaasi ayuu hadalkiisa sii raaciyay maxbuuska.
Waxuu sidoo kale crabka ku adkeeyay in Xabsiga ay ku heysato biyo la’aan, islamarkaana Duhur ka Dahur ay bariir qalalan halkaasi ku cunaan, waxuuna ku tilmaamay nolosha mid adag.
Sidoo kale, Saacid Yaasiin Axmed oo isna ku xiran Xabsigaasi ayaa xusay in nolol aan lagu tilmaami karin midda ay ku heystaan Xabsiga Magaalada Garoowe.
Dhibanahan ayaa carabdhabay in aan loo dulqaadan karin in Dowladda Shisheeya ay ku heysato ama ugu awood sheegato Dalkooda hooyo, maadaama u xiran yihiin sida uu sheegay Dowladda Seychelles.
Wasiirka Cadaallada Maamulka Puntland oo wax laga weydiiyay arimaha Maxaabiistaasi ayaa waxuu sheegay in uusan waxba ka qaban karin, islamarkaana howshaasi ay tahay mid isaga ka sareysa oo ka socoto Dowladda Seychelles.
Sikastaba, waxaa jira Muwaadiniin Soomaaliyeed kuwaasi oo qaarkood ku xiran Xabsiyo ku yaalla Dalka dibadiisa, iyadoo aanu jirin cid xil iska saarta wax ka qabashada dhibaatooyinkan ay wajahayaan Muwadiiniintan Soomaaliyeed.
Xildhibaannada labada Aqal Oo ka Turjumay Rabitaanka